Indlu yoMzobi - I-Airbnb
Le ndlu emangalisayo ye-bohemian
ehlala kumaphandle amahle akumntla weItali. I-10 min ukuhamba ngemoto ukuya ePavia kunye ne-15 min uhamba emasimini erayisi, kukuthatha ukuya kwelinye lawona ma-Monasteries amahle e-Italy. IMilano yimizuzu engama-20 yokuqhuba, ngemoto okanye ngololiwe. Le ndlu ikwindlu yasefama ebukekayo endala enegumbi lokuhlala elinebhedi enedobble, ikhitshi elityiwayo kunye negumbi lokuhlambela elikhulu. Ukufikelela kwigadi enkulu eluhlaza enelanga, enamathuba amaninzi okuhlala ngaphandle.
Umamkeli wakho uMaria Dyrting ngowaseDanish, kodwa weza kuhlala eCarpignago kwiminyaka engama-21 eyadlulayo, emva kohambo lwaseIndiya apho wadibana negcisa elizalelwe eSardinian. Bahlala eCarpignago bekhulisa intombi yabo, ngoku efunda eCopenhagen. U-Guido usandul 'ubuyela kwiSiqithi sakhe esithandekayo ukuba aqhubeke nomsebenzi wakhe (Enye yezona ndawo zihle kakhulu kwihlabathi !!!) , Kodwa ngaphambi kokuba ahambe, kunye baguqule i-studio apho wayesebenza khona, ibe yindawo encinane kakhulu. Wonke umntu uyichaza njengeyamkelekileyo kakhulu. UGuido wagqiba ekubeni asebenzise njengento enokwenzeka ukubonisa ubugcisa bakhe ... Ngoko ke ukuba uthanda umzobo, i-sculpture oa ifenitshala ngelixa uhlala kwindlu ...... uya kukwazi ukuyithenga kwaye uyithathe. ikhaya kunye nawe...... UMaria (mariadyrting.com) umamkeli wakho, ukwaligcisa, ixhwele, uMvelinqangi kunye nomdali onomsindo wevenkile yewebhu, ethengisa phakathi kwezinye izinto ezintle, incwadi ayenzele abantwana abancinci nabadala. .....Usebenza kusasa kwisikolo sabantwana abancinane ehlathini, kodwa xa esekhaya uthanda ukupheka amaqebengwana aze awatye egadini ......uya kudibana naye neekati zakhe ezi-2, uSocrates noShiva apho .. .... Ukuba ulusapho olunabantwana okanye ngaphezulu kunabantu aba-2 abahambayo, kuyenzeka ukuba ube nebhedi eyongezelelekileyo ......ngethemba lokubona....Maria
indawo entle ezolileyo yokuthatha umhlala phantsi emva kosuku edolophini. Kwigadi eluhlaza echumileyo ufumana indawo entle yokonwabela iglasi yewayini ngelixa uphulaphule iintaka zicula......okanye ungahamba uhambe phantsi kwiindlela zegrabile ezikusa kwimonki edumileyo iCertosa di pavia.
Ibingunyaka ngoku ukuba ndonwabile ukuba ndibambe kwi-artists house..... ke
Iintlanganiso ezininzi ezintle zemilingo kunye nabantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi kunye nehlabathi lonke .... ewe ndiyakuthanda ukudibanisa nokwabelana kwaye andinakulinda ukubona ukuba lo nyaka uza kuzisa ntoni .... wamkelekile
Iintlanganiso ezininzi ezintle zemilingo kunye nabantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi kunye nehl…
Iilwimi: Dansk, English, Italiano
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Giussago